Ulwazi - Fashione Group Co., Ltd.
I Izici TWS earphone we
Isici enkulu TWS earphone we kuyinto wireless, futhi abantu akusadingeki sikhathazeke emazombezombe ikhebula earphone we. Ngenxa inzwa ihlanganiswe optical, njll, le earphone TWS kungenziwa exhunywe ngokuzenzakalelayo futhi wasebenzisa uma ithathwa ebhokisini earphone, okuyinto ekahle kakhulu.
Kuqhathaniswa abavamile-Bluetooth, TWS earphone ezincane ngobukhulu kanye quality sound. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-Bluetooth okuthuthukile lwenza ukuxhumana kahle nokuzinza kangcono. TWS earphones ngokuyinhloko yakhiwe chips, izipikha, imibhobho kanye izinzwa eziningi. Ukuthuthukiswa ubuchwephese obehlukahlukene ezifana Ubuchwepheshe be-Bluetooth kokuthuthukisa, nokwahlukana kwezimboni chip izixazululo, ephathekayo isakhiwo ifoni izinguquko, ukwesekwa uhlelo, njll kuzosiza ukuthuthukisa ukuvuthwa TWS earphone we-ecosystem, kuyilapho izinzwa kanye AI ubuchwepheshe ikhuthaza diversification of TWS earphone we zokusebenza.
Kwakhululwa Apple AirPods, TWS earphone ziye kabanzi bebuka emakethe. Huawei, Xiaomi nezinye abakhiqizi iselula kanye Bose, 1MORE, Sennheiser, Sony nezinye-headphone uphawu ekusungulwe TWS earphone.
Indlela vala i-Bluetooth?
Kuqhathaniswa-headphone abavamile, Bluetooth okulula kuwusizo kakhudlwana, futhi uzisebenzise lapho uxhumeke iselula. Nokho, indlela vala i-Bluetooth? Ake uthole bazana.
Uma ufuna ukucisha i-Bluetooth ku "amandla phezu isimo", "cindezela isikhathi eside ukhiye umsebenzi" amasekhondi angu-3, ​​kuze kube ukubaniza osasitini, kungashiwo ivaliwe. Ukuvalwa kwama-headset empeleni kuhlehlisiwe ne ebhuthini, ukubeka headset ebhokisini ukushaja, cisha ibhokisi ukushaja, headset ngokushesha iyanqamula uxhumano lwe-Bluetooth, kuvale phansi bese engena isimo ukushaja.
Ngaphansi kwezimo ezivamile, i-Bluetooth headset ngeke ngokuzenzakalelayo cisha ngemva kwesikhathi Ukukhipha kusukela ukuxhumana nge-Bluetooth. Uma awudingi ke isikhathi esifushane, awudingi ukuba uyivale. Udinga nje kuphela ukuba cisha Bluetooth kwifoni ephathekayo, ngakho ifoni ungagcina amandla, kodwa uma kukhona isikhathi eside. Asikho isidingo ukusetshenziswa, khona-ke kungcono ukuvala, ngakho londoloza amandla
Ulwazi mayelana tws engenantambo Bluetooth kweqiniso
Septhemba 29, 2019
TWS yiyona isifinyezo Wireless True Stereo, TWS ephumelelisa-Bluetooth kweqiniso kwesokunxele kanye isiteshi esifanele ngokwahlukana engenantambo nge-Bluetooth ukuxhumana okungenawaya
1) IP Inkomba ezingeni
IP = Yokungena Ukuvikelwa
IPX1-3 grade: Kubi ukusebenza manzi, kungavimbela okuncane inkungu amanzi.
IPX4: kuvimbela wachela amanzi kusukela ekungeneni.
IPX5: kuvimbela jetting amanzi angangeni manzi nsuku zonke.
IPX6 ezingeni: kungavimbela ngokuphelele amagagasi enkulu bangangeni.
IPX7-8 grade: kungenziwa ofakwe ngokuphelele waterproof
2) I-Bluetooth 5.0 ne-Bluetooth 4.2 umehluko
I-Bluetooth 5.0 kuyinto inguqulo ethuthukisiwe ye-Bluetooth 4.2
(1) Ukusebenza kahle yokudlulisela ithuthukisiwe by izikhathi 2; ijubane ukudluliswa yanda, bohlu kuyathuthuka, ukusetshenziswa amandla ancipha kakhulu, futhi ngokukhuthazela kuyathuthuka.
(2) Ibanga ukudluliswa 4 izikhathi ukuthi Bluetooth 4.2.
(3) Lower amandla ukusetshenziswa, iyahambisana Bluetooth inguqulo endala.
(4) I-Bluetooth 4.2 ngokushesha ukwedlula-Bluetooth 4.1
3) Mayelana ukukhuthazela
Ngokuvamile, wireless Bluetooth has a ukuphila kwebhetri amahora 3-6. Nge ibhokisi ukushaja, kungaba ngokuyisisekelo usetshenziselwe 3-4 izikhathi. Kuyinto ukukhuthazela ezinengqondo.
4) Noise ukuncishiswa ulwazi
I NRR umsindo ukunciphisa Inkomba kuyinto segama Neural dor Ucwaningo. Inani umsindo wokwehla earplug ngokuvamile esashiwo NRR, kanye NRR kuyinto kunomsindo attenuation.
Active umsindo kwehliswa ukuncipha umsindo hardware. Isimiso ukusebenzisa circuit eyolanda ezizungezile umsindo kuma, bese siguqulwa isignali nabokhulumile umsindo kuze kube sekupheleni isikhulumi. Umsindo ethulwa indlebe yomuntu ambient umsindo + kuhlehlisiwe umsindo kuma. Kusukela iphuzu enembile umbono, umsindo kuyinto enciphile futhi umzuzi ngokwakhe.
Omunye umsindo ukunciphisa ubuchwepheshe ezinkulu isofthiwe umsindo ukunciphisa, ebizwa nangokuthi i-CVC umsindo ukunciphisa. Kuyinto umsindo isofthiwe ukunciphisa ubuchwepheshe eliza chip CSR. Isebenza kuphela uma ufona. Ngalobu buchwepheshe, imvelo ezungeze umsindo is attenuated. Enye ingxenye uzokwazi ukuzwa izwi sobala.
Njengamanje, TWS earphones ukuthi ingafinyelela asebenzayo umsindo ukunciphisa emakethe ngokuvamile ngempumelelo. Abangane abadinga kuyehlisa umsindo Ungathenga ekhethekile ezemidlalo Bluetooth futhi ekhethekile umsindo ukukhansela-headphone.
T Mobile Wireless Charger, Double Usb Car Charger, car Ishaja, Magnetic Cell Phone Charger, Mobile Phone Car Charger, Mobile Phone Charger,